Ciidamada amniga Soomaaliya oo diley 4 al-Shabaab ah - Sabahionline.com
Ciidamada amniga Soomaaliya oo diley 4 al-Shabaab ah Abriil 25, 2012
Ciidamada amniga ee dawladda Soomaaliya ayaa toogasho ku diley afar xubnood oo al-Shabaab ah habeenkii Talaadadii (24-ka April) ka dib markii ay dagaalyahaniintu labo rayid ah ku dileen qaybaha kala duwan ee magaalada, Nabadsugidda qaranka Soomaaliya ayaa ku sheegay war-murtiyeed ay soo saareen. Qodobbo la xiriira
AMISOM: Dagaalyahaniinta ajnebiga ah iyo al-Shabaab oo ka qaxaya Soomaaliya
Ciidamada amniga ayaa diley labo dagaalyahan oo bastooladu ku hubaysnaa ka dib markii ay dileen nin ka soo laabanayey masaajid ku yaalla xaafadda Black Sea. Saacado ka dib ayay ciidamada amnigu toogasho ku dileen labo kale oo dagaalyahan oo xaafadda KPP ku sugnaa, ka dib markii ay iyaguna dileen wiil yar. Labada xaafadoodba waxay ku yaalliin degmada Hodan. Dagaalyahaniinta ayaa la siiyey fursad ay isugu soo dhiibaan ciidamada ammaanka, laakiin waa ay diideen sida ay sheegtay Hay’adda Nabadsugidda Qaranku. Muxuu kula yahay qoraalkan?